Ny lamba mitsoka mitsonika (lamba mitsonika notifirina tsy vita amin'ny lamba) dia vokatra vita amin'ny lamba firakotra PP (polypropylene) avo lenta tsy voatenona. Io no akora fototr'ilay sarontava. Ny savaivon'ny fibre spinneret dia mety hahatratra 0,001 ka hatramin'ny 0,055 mm. Betsaka ny banga, firafitra malefaka, fanoherana ketrona tsara, ...
Ny vokatra plastika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatry ny famokarana indostrialy sy fambolena sy fiainana miaraka amin'ny fananany tena tsara toy ny lanja maivana, tanjaka avo, fanoherana ny harafo ary fanodinana mora. Na izany aza, amin'ny fampiharana betsaka ny vokatra plastika, ny fanariana ...
1. Ny mariky ny fantson'ny tariby elektrika, jereo tsara raha mifanaraka ny anaran'ny mpanamboatra, maodelin'ny vokatra du, ary ny fenitra fampiharana izay voalaza ao amin'ny fantsom-tariby Bai wire, ary koa misoroka ny vokatra sandoka dao. 2. Tsy simba ny endrika ivelany, ary tsy tokony hisy crisp, t ...